प्रकासित मिति : २०७३ चैत्र २२, मंगलवार प्रकासित समय : ०८:०६
काठमाडौँ । २०७४ वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रयोग गरिने मतदाता परिचयपत्रको छपाइ सोमबार सुरु भएको छ । आयोगको कान्तिपथस्थित केन्द्रीय कार्यालय परिसरमै परिचयपत्र छपाइको कार्य सुरु भएको हो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले डोल्पा जिल्ला त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका वडा नं. १० का मतदाता सुनकुमारी खत्रीको परिचय नम्बर १०५४०५७९ को मतदाता परिचयपत्र सार्वजनिक गर्दै परिचयपत्र छपाइको शुभारम्भ गरेका हुन ।
यसअघि बनाइएका पुराना परिचयपत्रबाट मतदान गर्न नपाउने आयोगले जनाएको छ । आयोगले आइतबारमात्रै स्थानीय तह निर्वाचनमा एक करोड ४० लाख ५४ हजार ४८२ मतदाताको नामावली स्वीकृत गरेको थियो ।
नयाँ परिचयपत्रमा विशेष प्रकारका भ्वाइड प्रिन्टोग्राफ, माइक्रोटेक्स्ट, डिफ्युज प्रिन्टिङ, क्यूआर कोडजस्ता सुरक्षण विधि अपनाइएको छ । यो परिचयपत्रलाई फोटोकपी वा स्क्यान गर्न मिल्दैन, त्यसो गरेमा नक्कली भएको तत्कालै थाहा हुने जानकारी आयोगले दिएको छ ।
छपाइ गर्ने जिम्मा पाएको ओम्नी गु्रपका अध्यक्ष तुलहरि सिंहले १० दिनमा छपाइ कार्य सक्ने जानकारी दिए । परिचयपत्रको चारैतिर सिल्ड भएकाले नभाँचिने र १० वर्षसम्म चल्ने उहाँले जानकारी दिए ।
प्रतिघन्टा ६५ देखि ७० हजार प्रति तयार गर्न सकिने र दैनिक सातदेखि १० लाख मतदाताको परिचयपत्रको छपाइ गर्न सकिने उनले बताए ।
एउटा परिचयपत्रको लागत नौ रुपियाँ ९९ पैसा रहेको छ । परिचयपत्र छपाइ छिटो भए पनि प्याकिङ गर्न भने समय लाग्नेछ । आयोगको कार्यतालिका अनुसार वैशाख १० गतेसम्म जिल्लाजिल्लामा पु¥याउने योजना छ । आयोगले संविधानसभा निर्वाचन २०७० देखि फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्रको व्यवस्था गरेको हो ।
आयोगले आइतबारदेखि नै मतदाताको नामावली पनि छपाइ सुरु गरेको थियो । मतदाताको नामावलीमा पनि मतदाताको तस्बिर अङ्कित हुनेछ । (गोरखापत्र)
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको स्वागतमा प्रचण्ड–माधव समूहको नेकपाद्धारा देशव्यापी विजय र्‍याली आयोजना
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले हिजो संसद विघटनको विषयमा परेका विभिन्न १३ रिटमाथिको वहससँगै त्यसलाई
संसद पुनस्थापनासँगै सरकार पुनगठनको चर्चाः सहजै सरकार नछाड्ने मुडमा प्रधानमन्त्री ओली !
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सल्लाहकारहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरिदिने
बैठकमा ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने संकेत
Reply on Twitter 1364444690720780289Retweet on Twitter 1364444690720780289Like on Twitter 1364444690720780289Twitter 1364444690720780289
संसदीय दलको बैठक पनि आजै बस्ने तयारी
Reply on Twitter 1364443689729228801Retweet on Twitter 1364443689729228801Like on Twitter 1364443689729228801Twitter 1364443689729228801
संसद पुनः स्थापना फैसलापछि उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भने–‘सर्वोच्चको निर्णय मानेपनि सम्मान गर्न सकिन्न’
कानूनी आवरणमा राजनीतिक प्रयत्न निस्तेज गरेको आरोप
Reply on Twitter 1364428651798831109Retweet on Twitter 1364428651798831109Like on Twitter 1364428651798831109Twitter 1364428651798831109
Reply on Twitter 1363759636457775112Retweet on Twitter 1363759636457775112Like on Twitter 1363759636457775112Twitter 1363759636457775112
Reply on Twitter 1363758153515503618Retweet on Twitter 1363758153515503618Like on Twitter 1363758153515503618Twitter 1363758153515503618